आजबाट हैन भोलीको दिन देखि नियमित एक गिलास पानीबाट सुरुवात गर्नुहोस आफ्नो दिनचर्या : कारण यस्तो छ - Sudur Khabar
प्रकाशित मिति : २७ असार २०७५, बुधबार २१:०४
डा. ऋषिकुमार काफ्ले कार्यकारी निर्देशक एवं वरिष्ठ मृगौला रोग विशेषज्ञ
राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्र
स्वस्थ्य देखिए पनि मृगौला बिग्रिन सक्छ
नेपालमा मृगौला रोगको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा विगतको तुलनामा मृगौला रोगको प्रकोप बढ्दै गइरहेको छ । यो रोग लागेका बिरामीको उपचारमा पहुँच बढेसँगै यो रोगका पीडित पनि बढ्दै गइरहेका छन् । रोगको कारण, असर, उपचार विधि र सावधानी अपनाउने सम्बन्धमा आममानिसमा जानकारी बढेको छ । तर, मृगौला रोगबाट कसरी टाढा रहने भन्नेबारेमा भने मानिसमा चेतना अझै आइसकेको छैन ।
मानिसले आफ्नो जीवनशैली तथा खानपिनमा खासै सुधार गरेका छैनन् । सहरी क्षेत्रका मानिसको निष्कृय जीवनशैलीका कारण रोगीको संख्या बढिरहेको छ ।
कस्तो अवस्थालाई मृगौला बिग्रेको मानिन्छ ?
मृगौलाले काम गर्न छोड्यो भने रगत फिल्टर गर्न सक्दैन । रगतमा क्रिएटिनिनको मात्रा बढ्छ । १.५ सेरम क्रिएटिनिन हुनुपर्नेमा सेरम क्रियटिनिन १.४ भयो भने १ मात्रा बढेको मानिन्छ । परीक्षण गर्दा यो मात्रा सही हो भने त्यो मृगौला आधा बिग्रिएको हुन्छ ।
त्यस्तो अवस्थामा मृगौला स्थायी रूपमा बिग्रिएको हो वा अस्थायी हो भनेर हेर्नुपर्छ । अस्थायी भनेको ज्वरो आएको वा अन्य औषधि सेवन गरेका कारणले मृगौलामा केही समस्या देखिएको अवस्था हो ।
यस्तो समस्या ज्वरो वा के कारणले औषधि खानुपरेको हो, त्यो सेवन गर्न छाडेपछि मृगौलाको समस्या पनि ठीक हुन्छ । त्यो पनि समयमा ध्यान दिएको खण्डमा मात्र ।
नत्र भने ३ महिनासम्म बेवास्ता गरेमा उपचार गरे पनि ठीक हुने सम्भावना कम हुन्छ । स्थायी भनेको मृगौला वास्तवमै काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
नेपालका यो रोग बढ्नुको कारण के हो ?
मृगौला रोग शरीरमा नै लाग्ने भए पनि बाहिरी तवरबाट रोगको लक्षण नदेखिने भएकाले अधिकांश व्याक्तिहरु स्वास्थ्य परीक्षण गराउन जाँदैनन् । जब लक्षण देखिन्छ, तबमात्रै जचाँउछन् ।
समयमा नजचाँउदा रोग उपचारमा ढिलो भइसकेको हुन्छ । यसमा व्यक्ति र रोग लागेका व्यक्ति छुट्याउन गाह्रो हुन्छ । सामान्य व्यक्तिहरुलाई समेत रोग लागिसकेको हुन सक्छ । त्यसैले स्वस्थ व्यक्तिले वर्षमा एकपटक अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ ।
कस्तो उमेर समूह र वर्गका नेपालीमा बढी मृगौलाको रोग देखिएको छ ?
सबैखाले नेपालीमा यो रोग देखिएको छ । यो रोगले धनी, गरिब, बच्चा, बूढापाका, गाउँ, सहर सबै क्षेत्रमा यो व्याप्त छ । सक्रिय जीवनशैली नअपनाउने सबै समूहका मानिसलाई यो रोग लाग्न सक्छ ।
उपचारका लागि मानिसको पहुँच कस्तो छ ? उपचार कत्तिको महँगो छ ?
हामीकहाँ मृगौला रोग विशेषज्ञको कमी छ । त्यसमाथि अधिकांश राजधानीमा रहने हुनाले उपचारमा प्रभाव परेको छ । क्रमशः सेवा विस्तार हुँदै हाल केही सुधारोन्मुख देखिएको छ । नेपालमा मृगौला बिग्रेपछि गर्ने उपचार महँगो छ । डायलसिस जीवनभरि गराउँदा धेरै खर्च हुन्छ ।
प्रत्यारोपण गर्न एकैपटक ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने गर्छ । प्रत्यारोपणपछि पनि औषधि खाइरहनुपर्छ, जसका लागि महिनाको १०÷१२ हजार लाग्छ । महँगो भएका कारण अधिकांशा नेपालीले यो उपचार गराउन सक्दैनन् । मृगौलामा लागेको रोगको सुरुमा उपचार गराए कम खर्चमा हुने र कुनै अवस्थामा निको पनि हुने गरेको छ ।
मृगौला बचाउन कस्तो सावधानी अपनाउनुपर्छ ?
शरीर स्वस्थ राख्न गर्ने उपाय नै यसबाट बच्ने उत्तम तरिका हो । दिनको सुरुवात एक गिलास पानीबाट गर्नुहोस् । त्यसैगरी दिनमा कम्तीमा पनि दुई लिटर पानी अनिवार्य पिउनु जरुरी छ । यो रोगबाट बच्न धुम्रपान त्याग्नुपर्छ । जथाभावी औषधि खानु हुँदैन । विशेषगरी दुखाइ कम गर्ने औषधि खानु हुँदैन । जीवनशैली सक्रिय बनाउन दैनिक व्यायाम गर्नुपर्छ । वर्षमा एकपटक पिसाबमा प्रोटिन र रगतमा त्रिएटिनिन परीक्षण गरेर मृगौलाको अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ ।
नेपालमा सस्तो र भरपर्दो उपचार कुनकुन अस्पतालबाट पाउन सकिन्छ ?
मृगौला फेल भएकाको उपचारका लागि हाल वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, किस्ट मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, पाटन अस्पताल, राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्रलगायत धेरै ठाउँमा यसको उपचार गरिन्छ । नेपालमा हाल आएर उपचार सरल र सस्तो पनि छ । तर, जब मृगौला बिग्रिन्छ तब धेरै नै महँगो पर्न जान्छ । औषधिहरु धेरै नै महँगा छन् ।
मृगौला रोगको उपचार कहाँ कहाँ उपलब्ध छ ?
राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्र देशको सबैभन्दा ठूलो डायलसिस सेवा प्रदान गर्ने नाफा नकमाई सेवा गर्ने गैरसरकारी संस्था हो ।
काठमाडौंको वनस्थलीमा रहेको राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्रमा ४८, ललितपुरको सुमेरु अस्पताल धापाखेलमा १२, तनहुँको दमौलीमा ५, चितवनको रत्ननगरमा ५ र विराटनगरस्थित रामलाल गोल्छा आँखा अस्पतालनजिकमा ५ गरी ७५ वटा मेसिनमार्फत डायलसिस सेवा उपलब्ध छ ।
थप सहयोग जुटेमा यो सेवा अन्य स्थानमा समेत विस्तार गर्ने योजना छ । देशका कुनाकाप्चासम्म यो सेवा पुर्याउने योजनामा सहयोगी हातको खोजीमा छौं ।